musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Chakavanzika Kupukunyuka: Peter Pan Neverland
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • wedzero • dzidzo • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • Myanmar Breaking Nhau • nhau • vanhu • Resorts • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
boulder chitsuwa drone foto na rob collins 20 04 19 1
rakanyorwa Keith Lyons
An Undercover Vashanyi uye munyori wekufamba akawanikwa Peter Pan Neverland. Kutsvaga kutiza muchivande?
Hauchafanirwi kuenda Disney Park kuti uwane Peter Pan Neverland. Chitsuwa chidiki chinotyisa chiri muIndian Ocean chingangodaro chakave kukurudzira kwaPan Pan's Neverland, humbowo hutsva hunoratidza, nekufanana pakati penyika yekufungidzira neBoulder Island muMergui Archipelago.
Chitsuwa chidiki chinotyisa chiri muIndian Ocean chingangodaro chakave kukurudzira kwaPan Pan yekunyepedzera Neverland, humbowo hutsva hunoratidza. Vatsvagiri vakawana fanano dzinoverengeka dzinoshamisira pakati pekufungidzira Neverland yakagadzirwa nemunyori JM Barrie uye chitsuwa chiri kure chisingambosvikiki chiri muGungwa reAndaman rinonzi Boulder Island.
Kuwanikwa uku kwakatungamira mukufungidzira nezve kwakatangira Neverland nevanyori venhoroondo, vanogadzira mepu, nyanzvi dzezvinyorwa uye vanyori vekufamba. Kutaura kuti chitsuwa chakasiyiwa, chakapfekedzwa sango chingave chakakonzera munyori Barrie inotsigirwa nehukama hwakawanda hunonakidza, anodaro munyori wekufamba Keith Lyons, anga achiongorora nyaya iyi kubvira pakati pa2018.
"Kunyange munyori wenhau wekuScotland nemunyori wemitambo vasina kumboshanyira munhu kuIndia kana kuAsia, kune hukama hwakawanda hunoratidza kuti munyori wePeter Pan aiziva nezvechitsuwa ichi, iyo yaimbove chikamu cheBurma colonial Burma."
Chido chekutsvaga iyo chaiyo nyika Neverland yaPeter Pan, Wendy, Vakarasika Vakomana naTinkerbell yakamutswa makore maviri apfuura apo mepu yechinyakare yemhando ye Neverland yaifananidzwa nemifananidzo yesataneti yeBoulder Island muMergui Archipelago iri pamhenderekedzo yeMyanmar. "Nguva yandakaona mepu ndakabayiwa kuti yakaenzana zvakadii neBoulder Island muMergui Archipelago," rinodaro chikepe cheNorway uye anoshandisa nzvimbo yekushanyira Bjorn Burchard weMoby Dick Tours. "Zvaishamisa kuti maitarisiro avo akafanana sei, nemamiriro akafanana emabhishi, makungwa, mahombekombe egungwa, sango, makungwa, zviwi uye matombo."
Kufanana kusinga tsanangurike kwezvitsuwa kwakasimbiswa nenyanzvi dzinoverengeka, kusanganisira aimbove muIndian Army cartographer uye muongorori. Iyo chena-jecha, coral reef chitsuwa pakutanga yakatumidzwa zita muzana ramakore re19th nemukurumbira weScotland hydrographer James Horsburgh. Iyo Mergui Archipelago yakashanda senzvimbo isina hanya yezororo kwaBrits yakatumirwa kuBurma, ichifananidza nebasa reNeverland senzvimbo yehudiki husingaperi, kupukunyuka, uye kusafa. Nekudaro, kubvira ma1940s iro boka rechitsuwa rakanga riri kunze kwemiganhu kune vese nekuda kwezvikonzero zvematongerwo enyika nemauto.
Ndimo chete mumakore gumi apfuura avo vekunze vakabvumidzwa kupinda muzvitsuwa zve 800 zvitsuwa zvisina vanhu, izvo zvakapoteredzwa neMyanmar nekumaodzanyemba kweThailand. Iyo diki-diki yekuchengetedza-inotungamirwa nzvimbo Boulder Bay Eco Resort yakavhurwa nguva pfupi yadarika.
Horsburgh Island, ine chimiro chakasiyana, inoratidzika zvakanyanya pamatsetse ekutanga emvura uye mamamepu nekuda kwenzvimbo yayo kumucheto kwekunze kweanonyengera makorari chitsuwa chitsuwa. "Barrie angadai aiziva zvakaitwa neHorsburgh kuEast India Company, uye mukugadzira chitsuwa, pamwe akashandisa chitsuwa chakaongororwa uye chakatumidzwa nemunyori wezvemvura kuti afuridzirwe," anodaro Burchard.
Aimbove Indian Army cartographer uye muongorori, Col Sanjay Mohan, weMepu & Nzvimbo, uyo akaongorora mamapu echitsuwa chekunyepedzera uye mifananidzo yesataneti yeBoulder Island, anoti chirabwe chekwaNeverland nekwakatangira kunoratidza zvakawanda nezve basa repfungwa uye nyaya mu kugadzira mepu. "Munguva yakapfuura, mamwe mepu enhoroondo akagadzirwa nevanyori vemepu kubva munhau dzevashanyi, zvichiratidza kuti fungidziro uye fungidziro yanga iri chikamu chakakosha chekartography. Kufanana kwechitsuwa chaicho chiri muGungwa reAndaman kuna Peter Pan's Neverland kunogona kungoitika netsaona, kana zvinogona kudaro nekuti mugadziri wemepu akafemerwa kubva pamepu chaipo kana pachati yechitsuwa cheBoulder. ”
Lyons anoti pane zvinopfuura kungofanana muchimiro cheBoulder chitsuwa kune yekutanga kuratidzwa kwe Neverland. “Chitsuwa hachina kungooneka chakafanana, nzvimbo yechitsuwa, zita rayo rapfuura, nekuvapo kwevapambi, maIndia, makarwe - uye kunyangwe mermaid - zvinotsigira dzidziso yekuti Neverland yaisangove nzvimbo iri kure, yakagadzirwa. , ”Anodaro Lyons. "Uyezve, pakanga paine kushamwaridzana kwakasimba kweScotland uye mabhuku neBurma, uye Barrie akafurirwa neshamwari dzake zhinji nevakararama panguva imwe naye avo vaigara kana kushanyira Burma, kusanganisira mudetembi Rudyard Kipling uyo angangodaro akapfuura nepachitsuwa ichi."
Munyori wekufamba uye mutori wemifananidzo Dave Stamboulis, munyori we 'Odysseus' Last Stand ', uyo akashanyira Boulder Island kuUSA Today anoti kune humwe hunhu hwe Neverland nezve chitsuwa ichi. “Kune nzvimbo zhinji dzekufamba-famba, kuva wega, uye hapana munhu ari kuzokuudza zvekuita kana kusaita. Mahombekombe aive akanaka kwazvo maererano nerudzi rweRobinson Crusoe paradhiso yenzvimbo. Sezvakaita Neverland, vafambi vanogara vachitsvaga nzvimbo dzezviroto. Aya maroto, kana zvirinani fungidziro, anowanzo sanganisira akajeka uye asina kubatwa nzvimbo kana angangoita kadhi-rakakwana shanduro dzadzo. Boulder inoswedera pedyo nekuti haina kusvibiswa kana kushatiswa sezvakaita mahombekombe mazhinji muSouth East Asia. ”
"Mbiri yeMergui Archipelago yekutyisidzira vapambi uye gypsies dzayo dzinofamba-famba mumakungwa zvechokwadi zvinowedzera nyaya kuBoulder Island kuva kurudziro yeNeverland," anodaro munyori wezvekufamba Christopher Winnan, munyori we 'Around the World in Eighty Documentaries'. Makarwe emvura yemunyu anogara munzvimbo dzemahombekombe, neRamree Island iri padyo ichionekwa sechitsuwa chinotyisa pasi rese, yakabata rekodhi yepasirese kufa kwevarwe, uye iguana dzakakura kunge dzakarasika kunge makarwe, kune zvimwe zvisikwa zvisingawanikwe zvakawanikwa mukati meGungwa reAndaman. .
"Zvishoma zvinozivikanwa nezve zviwi zviri kure zveMergui Archipelago, saka ndiani angati Boulder Island pachayo inogona kunge isingagarwe nevagari vasina kujairika? Tinkerbell neVakarasika Vakomana vangangodaro vasinganyunyuti pakati pemiti yemiti, asi clownfish neparrotfish vachiri kutamba vachihwanda mumatombo emakorari. ”